कस्तो अचम्मको गाउँ, जहाँ चोरी नै हुँदैन ! - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो अचम्मको गाउँ, जहाँ चोरी नै हुँदैन !
बझाङ, मंसिर १३ । गाउँभरिका घरमा कहिल्यै ताल्चा लगाउन पर्दैन । मूल्यवान सामानहरू बाहिरै असरल्ल हुन्छन्, हराउँदैन । वर्षभरि उब्जाइएका अन्नपात खलोमै राखिन्छ ।
कुन घरको सामान कहाँ राखिएको छ, सबैलाई थाहा हुन्छ । कसैले कसैको सम्पत्तिमाआँखा लगाउँदैनन् । साइपाल गाउँपालिकाका पाँचवटै वडामा कहिल्यै चोरी भएको छैन । उच्च हिमाली भू-भागमा पर्ने यस गाउँपालिकामा गहुँ, जौ, उवा, फापर, कोदोलगायत अन्न प्रशस्त फल्छ ।
तीनचार परिवार मिलेर एउटै खलो प्रयोग गर्छन् । स्थानीय भाषामा भाड भनिने खलो घरभन्दा केही टाढा बनाइएको हुन्छ ।
खरको छाप्रो हालेर बनाइएको खलोको बीचमा अन्नपात चुट्नका लागि सम्म परेको ठाउँ हुन्छ । वरिपरि ढुंगाको पर्खाल लगाएर भकारी राख्ने ठाउँबनाइएको हुन्छ । तीन–चार परिवारले आ–आफ्नो पर्खालमा लहरै भकारी राख्छन् ।
वर्षाबाट जोगाउन खरको छानो बनाइए पनि खलो चारैतिर खुलै हुन्छ । ‘खलोमा ४०र५० क्विन्टलसम्म अन्न हुन्छ,’ चुकझाडका बम्म बोहराले भने, ‘सबै अन्न बाहिरै हुन्छ, चोरी भएको थाहा छैन ।’
धलौनकी उजली धामीलेअन्नपात सबै खलोमै छोड्ने गरेको बताइन् । हामी कुनै पनि अन्न खलोबाट घरमा ल्याउँदैनौं,’ भनिन्, ‘त्यहीं चुट्छौं । खलोमै भकारीमा थन्क्याउँछौं । चाहिएका बेला आवश्यकताअनुसार त्यहींबाट झिक्छौं ।’
याे पनि पढ्नुस तिब्बतमा नेपाली हस्तकलाका सामानको व्यापार बढ्दै
धलौन, काँडा, चुकझाड, लासी, धुली, न्युना, बलौडी, जिमालगायत गाउँका बासिन्दा आफूलाई लाँगा देवताको करिया ठान्छन् । धुलीका मानिस त लाँगाकै सन्तान भएको विश्वास गर्छन् । कसैले चोरी गरे लाँगा देवता रिसाएर कुलमा अनिष्ट हुने विश्वासका कारण यहाँ चोरी नहुने धलौनका बिरु धामीले बताए ।
उनले भने, ‘चोरी खानेलाई देउताले सहँदैनन् ।’ आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई हुनेखानेले सजिलै ऋणधन दिने गरेको उनले बताए । ‘हुनेले नहुनेलाई सहयोग नगरे पनि देउताले राम्रो मान्दैनन्,’ उनले भने ।
आलुचोतो (एक प्रकारको हिमाली मूला) लगायत तरकारी पनि खेतमै खाल्डो खनेर भण्डारण गरिन्छ । ‘यहाँका मान्छेका लागि चोरी खानु र मर्नु एउटै हो,’ काँडाका मानबहादुर बोहराले भने, ‘५२ वर्ष लागें, अहिलेसम्म कसैले कसैको चोरी गरेको सुनेको छैन ।’
याे पनि पढ्नुस बझाङमा नगरभित्रकै गाउँमा खानेपानीको हाहाकार
चोरीका घटना नभएको देखेर प्रहरी अचम्ममा पर्छन् । झन्डै १८ महिना धुली प्रहरी चौकीमा काम गर्दा एउटा पनि चोरीको उजुरी नपरेको प्रहरी सहायक निरीक्षक आनसिंह धामीले बताए । ‘यहाँको समाज देखेर हामी अचम्ममा परेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्नपात मात्र हैन, बाहिरै छाडिएका धनसम्पत्ति पनि चोरी हुँदैन ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट